တိုင်ကြားရန် - BBC Burmese - BBC News မြန်မာ - Send - BBC
တိုင်ကြားရန် - BBC Burmese
မိမိတို့တင်ပြသောသတင်းများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်စေ တိုင်ကြားလိုသည်များရှိပါက အောက်ပါ ဖောင်ကို အသုံးပြုပါ။ ဘီဘီစီမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ မိမိတို့မှ ဆောလျင်စွာပြန်ကြားနိုင်ရန် ကြိုးစားပါမည်။
အခြားမေးမြန်း မှတ်ချက်ပြုလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်ရန် စာမျက်နှာကို အသုံးပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
သင်ပေးပို့လာသော အချက်အလက်များကို ဘီဘီစီနှင့် ဘီဘီစီမှ အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းများမှ သင့်အကြံပြုမှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် အခြားသောအချက်အလက်များကို သင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ တတိယအဖွဲ့အစည်းများသို့ ဝေမျှမည်မဟုတ်ပါ။
သင်နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ဘီဘီစီနှင့် ဘီဘီစီမှအသုံးပြုသော ဌာနများက မိမိတို့၏ အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းထားရေးမူဝါဒ၊ အချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေတို့နှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်သိလိုပါက ဘီဘီစီ၏ Privacy and Cookies Policy စာမျက်နှာတွင်ဝင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Copyright © 2021 ဘီဘီစီ. ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ အကြောင်းအရာများကို ဘီဘီစီမှ တာဝန်မယူပါ။. ပြင်ပ လင့်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့ ချဉ်းကပ်မှု/ လင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ.